मन्त्रीकै हैसिएतमा चिन जाँदै मन्त्रीबाट विस्तापित भएका केशव स्थापित !::Hamrodamak.com
मन्त्रीकै हैसिएतमा चिन जाँदै मन्त्रीबाट विस्तापित भएका केशव स्थापित !
मन्त्री स्थापितले आफूले आइतबार गर्न लागेको चीन भ्रमण मन्त्रीकै हैसियतमा हुने बताए ।
काठमाडौं,१६ कात्तिक । प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री केशव स्थापितले आफू बर्खास्त भएपछि सामान्य प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्थापितले आफूलाई बर्खास्त गरिएको भर्खरै जानकारी आएको बताए । बर्खास्तीपछि अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने र पार्टी नेतृत्वसँग छलफलपछि मात्रै बोल्ने उनले बताए ।
मन्त्री स्थापितले आफूले आइतबार गर्न लागेको चीन भ्रमण मन्त्रीकै हैसियतमा हुने बताए । चीनबाट फर्किए लगत्तै आफूलाई बर्खास्तीको कारणलगायतका बिषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने स्थापितकाे भनाइ छ ।